Iwuli ulo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Iwuli ulo
Esi eji aka aka wuo ụlọ na okpokoro okpomọkụ
Nnukwu anụ ọkụkọ na dacha bụ azụmahịa na-ewu ewu. Dika umu nnumanu nwere ike inwe ebe ozo ebe ana achota ya ma lee anya. Ya mere, anyị kpebiri ịgwa gị usoro niile nke iwu ụlọ a, yana ihe ndị a chọrọ maka ụlọ ahụ. Ịrụ onwe gị abụghị ọrụ siri ike.
Kedu ihe bụ onye na-edozi onwe ya, mmepụta onwe ya nke igbe pụrụ iche maka ịzụ anụ ọkụkọ
Ọ bụrụ na ị bụ usoro ozuzo na-etolite etolite, ọ dị mkpa ka ị na-elekọta nlekọta ha. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ na-abịa na nnapụta. N'ezie, ị nwere ike ịzụta igbe dị na ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ahịa, ma ọ nwere nnukwu ego. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi jiri aka gị mee onye na-eji aka gị eme ihe.
Otu esi eto ezi owuwe ihe ubi: mmeputakwa nke osisi garlic
Kedu uru na imerụ carrots maka ụmụ nwoke? Ọ na-enyere aka melite ike na ọrịa?
Gịnị mere anyị ji hụ nduru vaịn na ọ dị mma maka mmanya?
Ihe mejupụtara na uru bara uru nke walnuts maka ụmụ nwanyị
Ose osere Lyubasha: nkọwa nke ụdị dị iche iche, nuances nke ịkụ mkpụrụ na ihe nzuzo nke elu
Ọ ga-ekwe omume maọbụ ka ị ghara iji garlic maka pancreatitis na cholecystitis, ọ bụkwa n'ihi gịnị?
Ụdị ọkụkọ nke nwere ike ịnweta foto na nkọwa
Otu esi etinye akwa na oke bekee